Iyo Ataribox chirongwa chakamiswa zviri pamutemo !!! | Linux Vakapindwa muropa
ataribox Yakapihwa seprojekti kune vese avo vanhu vasina hanya avo vaida kudzoreredza iko iko kweiyo yakasarudzika Atari michina uye yechinyakare mitambo yemavhidhiyo ine twist yemazuva ano. Iyo Ataribox yaingova chinhu chinopfuura chazvino mutambo weconsole neinopfuura yakadzikama Hardware ine AMD machipisi uye neLinux-yakavakirwa mashandiro sisitimu iyo iwe yaunogona kumhanya ese ari maviri echinyakare mitambo uye mimwe mitambo mitsva yakagadzirirwa chaizvo iyo. Hapana anoshamisa uye anotevera-chizvarwa mifananidzo, asi koni yakagadzirirwa vese avo vaifarira mitambo yekare uye vane iyi vhidhiyo koni ine vintage dhizaini kumba.
Mazuva mashoma apfuura zvakaziviswa kuti iwe unogona kutobhadhara iyo pre-odha iyi koni uye nekudaro uve nechokwadi chekuti isu tichava nayo yakachengeterwa painopedzisira yatanga kutengeswa. Asi ikozvino vatirova uye zvinoita sekudaro chirongwa chakambomiswa zviri pamutemo. Mushure mekutanga paIndieGoGo kuti ubhadhare koni iyi kuburikidza nekuwanda kwevanhu, ikozvino yakamiswa sezvakaratidzwa papeji ino. Chokwadi ndechekuti zuva remushandirapamwe wekutangisa wakanonoka uye chiri chinhu chakaratidzika kunge chiri pachena kuongorora mashoma mashoma akapihwa nevanhu vaitungamira chirongwa ichi ...
Asi kushaikwa kwedata Haisiyo yega chinhu inoshungurudza vateveri vari kuona chirongwa ichi, asi kuti ikozvino chakamiswa kunyange chisati chatanga. Vagadziri veiyi Ataribox vakaburitsa notices umo vanoti iyo IndieGoGo kuburitswa kwakambomiswa nekuti vanoda nguva yakawanda yekugadzira chikuva uye nharaunda yenharaunda yeAtari yakanga isati yagadzirira nekukurumidza. Nekudaro, zvinoita sekunge havasi kuzomisa kure nazvo, nekuti ivo vanoti kwavari kugadzirwa kweAtaribox kwakakosha uye ivo vanoda kuve nechigadzirwa chakakodzera kumirira.
Vakaisa chirongwa chiri kufamba kusunungura gadziriso uye rumwe ruzivo rwakadzama ruchapihwa munguva pfupi, saka isu tichava takaterera kuti tione zvavanotiudza. Uyu ndiwo meseji inoverengwa mune vese avo vakabvunza nezve ino koni yemutambo. Nekudaro, kunyangwe paine mazwi ane tariro, vazhinji ndevaya vanofunga kuti uku ndiko kupera kweAtaribox uye kuti pamwe haizooneke sezvakavimbiswa, asi kuti ichamiswa uye hatife takaona muchina unonakidza uyu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo Ataribox chirongwa chakamiswa zviri pamutemo !!!